Madaxweynihii hore ee Barcelona Joan Gaspart oo sheegay inuusan waligiis cafin doonin Luis Figo
Thursday, January 24th, 2019 - 09:01:32
Tuesday November 28, 2017 - 10:41:15 in Wararka by Hussein Hadafow
Madaxweynihii hore ee Barcelona Joan Gaspart ayaa sheegay inuusan waligiis cafin doonin Luis Figo
Ninkaan ahaa hogaamiyaha Barca ayaa wax badan ka hadlay asiga oo sheegay in Luis Figo uu qiyaamay. Joan Gaspart ayaa ahaa madaxweynihii Barca 2000-2003dii waxuuna ka hadlay xaalado badan intuu maamulka Barca ka tirsanaa.
”Figo wuxuu qiyaameeye Barcelona, waana kan kaliyah aan wax xushmad ah u heeynin” yuu sheegay xilli uu la hadlaaye TV3.
Gaspart ayaa sidoo kale qiray inuu asiga ahaa ninkii shaqada ka ceeriye Johan Cruyff xilli uu ahaa madaxweyne ku xigeenka Barcelona uuna shaqada ka ceeriye macalin Johan Cruyff.
”Waxaa ay aheed inaa u sheegaa in shaqada tababare ee Kooxda loo magacabay Bobby Robson xilli ciyaareedka cusub”. Wuuna sii qortay inaa ceeriye.
Waxaa uu si heer sare ah uga hadlay Lionel Messi, maadama uu ka mid ahaa dadkii wiilka reer Argentina ku caawiye Kooxda biloowgii hore ee waayaha caruurnimo ee Messi. ”Markii uu i arkaa farxad ayuu la ilmeeyaa Messi waa mid abaal ii haayo maadama aan dhahay haka tagin Kooxda”. Sidaas ayuu Gaspart sheegay.
Madaxweynii hore ee Barca ayaa sidoo kale cadeeye in xiddiga reer Brazil ee Ronaldo Nazario ay aheed waxii ugu adkaa ee uu wajahay xilligii ay la soo wareegaayeen. ”Waxa ay aheed wax aad u adag in lala kulmaa maadama uu qaranka Brazil la xareesna waxaa ay aheed inaa u dhaqaaqnaa wax adag ayuu Gaspart sheegay”. ”Aniga ayaa hoos isku dhigay oo waxaan iska dhigay kabalyeeri si aan u galaa qolkiisa halkaas oo aan kula soo hadlay waloow galista qolkiisa ay igu noqotay wax adag sida madaxtooyo oo kale. Xilligaas Miami ayay joogeen xulka Brazil.